वडाध्यक्षले कोरोना सङ्क्रमितको परिवारलाई घरभित्र ताल्चा लगाएर थुनेपछि…. « Pariwartan Khabar
वडाध्यक्षले कोरोना सङ्क्रमितको परिवारलाई घरभित्र ताल्चा लगाएर थुनेपछि….
5 September, 2020 12:40 pm
कोभिड–१९ सङ्क्रमित भक्तपुर नगरपालिका–१० कमलविनायकका एक पुरुषको घरमा नौ जनालाई घरभित्र राखेर वडाध्यक्षले ताल्चा लगाइदिएका छन् ।
कमलविनायकमा भने वडाध्यक्ष र छिमेकीले नै परिवारको सहमतिमा बाहिरबाट ताल्चा मार्न भनेपछि प्रहरी रोहवरमा बसेको जनाउँदै पीडितको निगरानी भने छिमेकी र जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष प्रचण्डले भने : सचिवालय बैठक बोलाऔं
काठमाडौँका १ हजार ३ सय ५७ सहित थप २ हजार ५ सय ८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि